Torohevitra aseho |
Ho an'ny lehilahy
Blade 1 ho an'ny lehilahy
Blade 2 ho an'ny lehilahy
Blade 3 ho an'ny lehilahy
Blade 4 ho an'ny lehilahy
Blade 5 ho an'ny lehilahy
Blade 6 ho an'ny lehilahy
Ho an'ny vehivavy
Blade 1 ho an'ny vehivavy
Sela 2 ho an'ny vehivavy
Blade 3 ho an'ny vehivavy
Blade 4 ho an'ny vehivavy
Blade 5 ho an'ny vehivavy
Torohevitra momba ny fiharatra ho an'ny vehivavy
Rehefa manaratra tongotra, tongony na faritra bikini, ny moisturization mety dia dingana voalohany lehibe. Aza manaratra mihitsy raha tsy mandena ny volo maina amin'ny rano aloha, satria ny volo maina dia sarotra ny manapaka ary manapotika ny moron-kiran'ny hareza. Ny maranitra maranitra dia zava-dehibe amin'ny fahazoana akaiky, ahazoana aina, fahasosorana ...
Miharatra mandritra ny taona
Raha heverinao fa ady maoderina ny tolon'ny lehilahy manala ny volo tarehy dia misy vaovao ho anao. Misy porofo arkeolojika fa, tamin'ny vanim-potoana farany vato dia nisy lehilahy voaharatra volontany, obsidian, na clamshell, na koa clamshells nampiasainy toy ny tweezers. (Ouch.) Taty aoriana, nanandrana tamin'ny alimo ny lehilahy, polisy ...
Dingana dimy mankany amin'ny fiharatana lehibe
Ho an'ny fiharatana farany sy tsara, araho fotsiny ireo dingana vitsivitsy tena ilaina. Dingana 1: Sasao ny savony sy ny rano mafana hanala menaka amin'ny volonao sy ny hoditrao, ary hanomboka ny fanalefahana ny whisky (mbola tsara kokoa, aharatra aorian'ny fandroana, rehefa voky tanteraka ny volonao). Dingana 2: ny volo malemy tarehy dia ...
Tsy misy lalana 77 ChangYang, Distrikan'i JiangBei, Ningbo, Sina